Maalin: Janaayo 22, 2020
'Doomaha tareenka', oo loo adeegsaday gaadiid xamuul sannado badan oo aan shaqeyneyn tan iyo 2013, ayaa dib loo isticmaali doonaa. Xawaaladi uhoreeyay ayaa la dayactiray waxayna shaqeyn doontaa sanadka 2020. Sidee ayay wadihii tareenadu uga gudbeen Sirkeci una sii gudbiyeen Haydarpaşa wakhtiyadii hore? [More ...]
Waxaa la arkay in dhoofinta Ruushka, oo si weyn loogu dalbaday xiriirkeenna, oo dhawaanahan soo hagaagay, sidoo kale waa mid aad waxtar u leh. Laakiin tan iyo wixii ka dambeeyay markii u dhexeeyay labada dal [More ...]
Eygii, ee magan galyada u raacay baska xilliga qaboobaha, ayaa diiriyey. Eygan, oo ku waayey milkiilihiisa Antalya isla markaana qabow qabow ku dhacay, ayaa magan galyo ka helay baska dadweynaha ee 07 AU 0180, kaas oo safar ku maray khadka Varsak-Faculty. Ey qurux badan baska dhexdiisa [More ...]
Danjiraha Japan Akio Miyajima ayaa booqday Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha Sivas (STSO). Akio Miyajima, Safiirka Japan, oo ay soo dhoweeyeen Gudoomiyaha STSO Mustafa Eken, ayaa lagu marti qaaday qolka borotokoolka M. Rifat Hisarcıklıoğlu. Eken, [More ...]
Dawlada Hoose ee Magaalada Izmir waxay balaarinaysaa duulimaadyada hada jira iyada oo la eegayo ujeedada hadafka hagaajinta gaadiidka badda. Markabkii ugu horreeyay ee gawaarida loo adeegsado sanadkan ayaa laga bilaabay Tuzla iyadoo xaflad loo qabtay. Kordhinta saamiga gaadiidka badda ee gaadiidka magaalooyinka [More ...]
TUBITAK MAM iyo Machadka Daraasaadka Qaranka ee Boron (BOREN) ayaa si wada jir ah uga wada shaqeeynayeen sidii loo horumarin lahaa gaari cusub oo guriga ah oo ay ku shaqeeyaan shidaalka hydrogen oo ay soo saareen 2 cutub. Gaadhiga horumaray wuxuu leeyahay mashiin isku-dhafan iyo [More ...]
Huseyin Keskin, Agaasinka Guud ee Maamulka Garoomada Diyaaradaha ee Gobolka (DHM and) iyo Gudoomiyaha Gudiga, ayaa baaray Dhismaha Terminal Airport ee Gaziantep iyo Dhismaha Apron. Ku saabsan heerka ugu dambeeya ee shaqada ka imanaya mas'uuliyiinta laanta dhismaha [More ...]
Sannad-guuradii 15-aad ee Bandhigga Barafka ee 'şıambaşı', oo lagu qabtay heldambaşı Plateau, oo ah mid ka mid ah xarumaha dalxiiska ee loogu jecel yahay Ordu, ayaa la qabtaa sannadkan. Bandhigga, oo sanad walba la qabto, wuxuu noqonayaa suuq dhaqameed, Axad, Janaayo 26, 2020. [More ...]
Ku sii wadista waxbarashadeeda iyada oo loo marayo baaxadda isbeddelka dhijitaalka ah, Shirkadda Mars logistics waxay la saxiixday borotokool iskaashi Jaamacadda Beykoz oo loogu talagalay sirdoonka dabiiciga ah iyo xalalka tikniyoolajiyada cusub Mustaqbalka qaybta saadka ee xadka iskaashigu waa labadaba waxbarasho [More ...]
Ururka Bixiyaasha Adeegga Gaadiidka iyo Saadka ee UTİKAD ayaa daabacay warbixin tilmaami doonta qaybta. Warbixinta waxaa lagu diyaariyey iftiinka aqoonta iyo khibradda UTİKAD Waaxda Xiriirka waaxyaha Waaxda Xiriirka waaxda Alperen Güler [More ...]
TCDD waxay socod kale ku sameysay Konya-Ankara Train Speed ​​Speed ​​Train (YHT). Iyada oo kor loo qaadayo qiimaha, khidmadda is-qoritaanka ayaa kordhay 194 boqolkiiba. TCDD waxay qaadatay socod kale. Sida xogta lagu helay [More ...]